Basting – အဆိုပါ Tailoress
ဧပြီလ 11, 2015 | အထူးပြောစရာမရှိ | Basting, Dressmaker's Stitches, ချုပ်, Tailor's Stitches
ထောင့်ဖြတ် Basting ဒီချုပ်တစ်ဦးလျောက်ပတ်သည်အလုံလုံခြုံခြုံအတူတူထည်မျိုးစုံကိုအပိုင်းပိုင်းကိုကိုင်ထားရန်အသုံးပြုသည်. interfacing ကျင်းပရန်အဲဒါကိုအသုံးပြုပါ, Line နဲ့အတူတူရင်ဆိုင်နေရ. အစွန်းမှလက်ျာဘက်ထောင့်မှာထည်တဆင့်ဆေးထိုးအပ်ကိုယူပြီးကျန်ရစ်ဖို့အလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်များက Create.
တောင်မှတပ်ဆင်ရသောအခါစိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယာယီချုပ်ရိုးအတှကျအသုံးပွုတစ်ဦးက basting ချုပ် Basting. သင်သည်အခြားပေါ်သို့ထည်၏တစ်အပိုင်းအစဖြေလျော့ကြသောအခါသင်တို့ကိုလည်းဒီချုပ်အသုံးပွုနိုငျ, သို့မဟုတ်စုဖန်တီးခြင်း. လက်ကပုံမှန်ပြေးချုပ်ထက်ပိုရှည်တွေချုပ်, ကိုပင်ထည်နှစ်ဖက်စလုံးမှာသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း.
မညီမညာဖြစ်နေသော Basting ကိုသင်ယာယီသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းအလုပ်အဘို့ဤချုပ်အသုံးပွုနိုငျ. သငျသညျအတူတူအမြဲတမ်းနှစ်ခုအပိုင်းပိုင်းအဘို့ဤချုပ်သုံးပြီးနေတယ်ဆိုရင်, မမြင်ရတဲ့စောင့်ရှောက်ရန်ချုပ်ထဲမှာချည်၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုသာဖွင့်ကောက်. ဖန်တီးရန်, အသီးအသီးကတခြားကနေခွဲ 1cm အကြောင်းသေးသေးချုပ်ယူ.
ဧပြီလ 11, 2015 | အထူးပြောစရာမရှိ | Basting, Dressmaker's Stitches, ချုပ်
Long ကအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်ဆောက်လုပ်ရေး၏အရေးကြီးသောဒေသများညွှန်ပြရန်အသုံးပြုပင် basting ချုပ် tracing thread, ဥပမာ; ချုပ်ရိုး-လိုင်းများ, အိတ်ကပ်, ဒီဇိုင်းအသေးစိတ်ကို. ယာယီဆောက်လုပ်ရေး၏တိကျမှုသေဒဏ်စီရင်၏အကြိုးအတှကျအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းပေါ်သို့တိုက်ရိုက်ချုပ်.
Basting မျက်မြင်မရတဲ့နည်းနဲ့အခြားဖို့ထည်၏တစ်အပိုင်းအစပူးတွဲအသုံးပြုချော်. ပုံစံများသို့မဟုတ်ခံရသောဒဏ်ချက်အားလိုက်ဖက်ခံရဖို့လိုအပ်ဘယ်မှာထည်အပေါ်ကို အသုံးပြု. အဘို့ကောင်းသော. ထိပ်တန်းထည်၏ချုပ်ရိုးစရိတ်ခေါက်နှင့်စာနယ်ဇင်း. ထည်အောက်မှာ၏ချုပ်ရိုးစရိတ်ပေါ်သို့ pin. လက်ျာဘက်လက်ဝဲဘက်သို့အလုပ်မလုပ်. လုံလုံခြုံခြုံချည်. Take approximately 1cm stitches through under fabric then through […]